Dagaalka Ganacsi: Midowga Yurub wuxuu la xaajoon doonaa Maraykanka, inkastoo diidmada Faransiiska - TELES RELAY
ACCUEIL » DHAQAALAHA »Dagaalka Ganacsi: Midowga Yurub wuxuu la xaajoodayaa Maraykanka, inkastoo Diidmada Faransiiska
Dagaalka Ganacsi: Midowga Yurub wuxuu la xaajoon doonaa Maraykanka, inkastoo diidmada Faransiiska
Dowladaha EU-da ayaa Isniintii ogolaaday in wadahadaladii furitaanka la yeeshay Mareykanka si looga fogaado dagaalka ganacsiga ee Washington, inkastoo ay Paris u muuqato in ay diidan tahay in ay la xaajooto lamaane-hawleheeda jawiga.
Dawladaha Xubnaha ka ahMidowga Yurub Isniintii, 15 Abriil, waxay heshiiskii ugu dambeeyay siisay furitaanka wadahadaladii ganacsiga ee lala yeeshay Maraykanka, in kasta oo Faransiisku mucaaradkani ahaa.
Dawladaha yurub waxay u codeeyeen si adag si ay u gutaan waajibaadka gorgortanka ee ay soo jeedisay Komishanka Yurub. Kaliya France ayaa ka soo horjeesatay, halka Belgium laga diiday.
Wakiilka Ganacsiga, Cecilia Malmström, ayaa lagu qanciyay in uu heshiis la gaari karo Washington kahor dhammaadka guddiga Komishanka Yurub, Jean-Claude Juncker, 31 bisha October ee soo socota.
Mareykanka waa wadaag ganacsiga ugu weyn ee Midowga Yurub iyo kan kale. Ganacsiga ka dhexeeya labada shirkadood ayaa ku jira 30% ganacsiga aduunka.
Fududeynta hawsha shirkadaha
Komishanku, oo isku duwaya siyaasadda ganacsiga ee Miisaaniyaanka labaatanaad, wuxuu doonayaa inuu wadahadal la yeesho maamulka Trump oo leh awood laba-geesood ah: si loo helo hoos u dhigidda waajibaadka canshuurta ee alaabooyinka warshadaha, iyo fududeynta hawsha shirkadaha ay tahay inay muujiyaan alaabooyinka waxay la kulmaan heerarka Yurub ama Maraykanka.
>> Si aad u aragto: Donald Trump wuxuu ku dhawaaqaa dagaalka ganacsiga ee Europe
Emmanuel Macron ayaa ku sheegay shirkii wadatashiga Yurub ee Arbacadii lagu qabtay magaalada Brusseles ee Paris in uu diidi doono furitaanka wadahadaladan, isaga oo ka soo xigtay eedeymaha ay ku shaqeynayaan Donald Trump iyo go'aankiisa ahaa inuu ka laabto Maraykanka. Heshiiska Paris ee cimilada.
Faransiiska ayaa ugu yaraan rajeynaya in su'aasha dib loo dhigo ka dib doorashooyinka Yurub ee Maajo, iyada oo aan awood u lahayn inay si rasmi ah uga soo horjeeda, furitaanka wadahadalada ganacsiga oo aan u baahneyn isu-xaajoodka Miisaan-Sideed, sida ay tahay waa kiiska qaababka kale ee yurub.
Qaadku wuxuu ku hanjabaa inuu kor u qaadayo tariffs
Sida laga soo xigtay diplomaasiyiin,Germany Dhinaca kale, waa in si deg deg ah loo arko wadahadaladii ay bilaabeen inay isku dayaan inay ilaaliyaan kuwa raba inay ka ilaaliyaan qiimaha sare ee Maraykanka, oo ay ku jiraan Donald Trump ayaa ku celcelinay suurtogalnimada.
Komishanku, si kastaba ha ahaatee, waxay xaqiijinayaan inaysan ka doodi doonin tariffs iyo caqabadaha kale ee ganacsiga beeraha, khaanadaha casaan ee Faransiiska iyo wadamada kale ee Yurub laakiin shuruudda maamulka Trump ee jeclaan lahaa si loo sii furo suuqyada Beesha si ay u soo saaraan.
Dagaalka ka soo cusboonaaday lacagaha kabaha ee Airbus iyo Boeing
Maraykanka iyo Midowga Yurub ayaa sidoo kale bilaabay diyaar garow ay ku doonayaan in ay u adeegaan shirkadaha diyaaradaha ee Airbus iyo Boeing.
Madaxwaynaha Maraykanka ayaa sheegay in Washington ay ku soo rogi doonto canshuuro ku xiran 11 bilyan doolar (9,8 bilyan euros) oo ah alaabta yurub.
Komishanka Yurub ayaa ka soo horjeeda soo saarista liis ah waxyaabaha laga keeno Maraykanka, oo ka dhigan wadarta guud ee 20, kaas oo laga yaabo in ay u hoggaansamaan hawlaha canshuurta sare, sida laga soo xigtay ilo Yurub.
Isha laga soo xigtay: https://www.france24.com/en/20190415-fire-green-negotiations-commercial-united-states
Cobac wuxuu isku diyaarinayaa in uu xakameynayo dhammaan hawlaha ku wareegsan e-lacagta
Hydrocarbons: adoo iibsanaya Anadarko, Chevron oo cagajoogay Algeria - JeuneAfrique.com